ဇူလိုင် (၁၄) ပြင်သစ်အမျိုးသားနေ့အထိမ်းအမှတ် ဖိတ်စာကတ်ဒီဇိုင်းပြိုင်ပွဲ - Institut français de Birmanie
ဇူလိုင် (၁၄) ပြင်သစ်အမျိုးသားနေ့အထိမ်းအမှတ် ဖိတ်စာကတ်ဒီဇိုင်းပြိုင်ပွဲ
| | | Anywhere	|	 Posted3ပတျ ago
၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင် ၁၄ တွင် ကျရောက်သော ပြင်သစ်အမျိုးသားနေ့အထိမ်းအမှတ်အဖြစ် ပြင်သစ်ယဉ်ကျေးမှုဌာနက ကျင်းပသွားမည့် ဖိတ်စာရုပ်ပုံဒီဇိုင်းပြိုင်ပွဲတွင် ပါဝင်လိုသည့် ပုဂ္ဂိုလ်များအား ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်။
၂၀၁၉ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၁၄ ရက်တွင် ကျရောက်သော ပြင်သစ်သမ္မတနိုင်ငံ အမျိုးသားနေ့အထိမ်းအမှတ်အဖြစ် ပြင်သစ်သံအမတ်ကြီးသည် တရားဝင်ဖိတ်စာများကို ပေးပို့သွားမည်ဖြစ်ရာ ယင်းဖိတ်စာကတ်ရုပ်ပုံဒီဇိုင်းအတွက် ပြိုင်ပွဲတစ်ရပ် ပြုလုပ်သွားမည် ဖြစ်ပါသည်။
အပိုဒ် ၁ ။ ။ ပြိုင်ပွဲဝင်များ
အသက် ၃၀ နှစ်နှင့်အောက် ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်း ပညာရှင်အဆင့်၊ ဝါသနာရှင်အဆင့် ခွဲခြားမထားဘဲ တစ်ဦးချင်းဖြစ်စေ၊ အုပ်စုလိုက်ဖြစ်စေ မည်သည့်နိုင်ငံသားမဆို ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်နိုင်ပါသည်။
အပိုဒ် ၂ ။ ။ မူ
ဒီဇိုင်းပုံတွင် ပြင်သစ်နိုင်ငံ၏ ဆောင်ပုဒ်ဖြစ်သော “လွတ်လပ်ခြင်း၊ မျှတခြင်းနှင့် ရင်းနှီးချစ်ခင်ခြင်း” (Liberté, Egalité, Fraternité ) ကို ထည့်သွင်းရေးဆွဲရပါမည်။
အပိုဒ် ၃ ။ ။ နည်းစနစ်နှင့် ပုံစံ
ပြိုင်ပွဲဝင်များသည် ရေဆေး၊ ဆီဆေး၊ ဖယောင်းရောင်စုံ၊ ကွန်ပျူတာဆော့ဖ်ဝဲလ် အစရှိသည့် ကြိုက်နှစ်သက်ရာ နည်းလမ်းတို့ကို အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
ဒီဇိုင်းပုံသည် A5 (အလျား ၂၁ စင်တီမီတာ x အနံ ၁၄.၈ စင်တီမီတာ) အရွယ်အစား ရှိရမည်ဖြစ်ပြီး အလျားလိုက်ပုံစံဖြင့် ရေးဆွဲရပါမည်။
ကတ်၏ နောက်ကျောတွင် ရေးဆွဲသူ၏ အမည်၊ အသက်၊ လိပ်စာ (အင်တာနက်စာမျက်နှာ၊ ဖုန်း၊ Facebook) တို့ကို ဖော်ပြထားရပါမည်။
အပိုဒ် ၄ ။ ။ ရွေးချယ်ရေးအဖွဲ့
ပြိုင်ပွဲဝင်များ၏ လက်ရာများကို ဆုံးဖြတ်ပေးမည့် ရွေးချယ်ရေးအဖွဲ့တွင် အနုပညာရှင်များ၊ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ပြင်သစ်သံရုံး၏ သံတမန်အမှုထမ်း၊ အရာထမ်းများ ပါဝင်ပါမည်။ ရွေးချယ်ခံရသည့် ဒီဇိုင်းပုံကို တရားဝင်ဖိတ်စာကတ်ဒီဇိုင်းအဖြစ် အသုံးပြုကာ ပြင်သစ်သံရုံး၏ မြန်မာနိုင်ငံနှင့် နိုင်ငံတကာရှိ မိတ်ဖက်ပုဂ္ဂိုလ်များထံ ပေးပို့သွားမည် ဖြစ်ပါသည်။
အရွေးချယ်ခံရရန်အတွက် ပြိုင်ပွဲဝင်များ၏ ဒီဇိုင်းပုံများသည် သတ်မှတ်ထားသော စည်းကမ်းများနှင့်အညီဖြစ်ခြင်း၊ ပြင်သစ်နိုင်ငံ၏ ဆောင်ပုဒ်ဖြစ်သော “လွတ်လပ်ခြင်း၊ မျှတခြင်းနှင့် ရင်းနှီးချစ်ခင်ခြင်း” တို့အနက် အားလုံးဖြစ်စေ၊ တစ်ခုကိုဖြစ်စေ ကောင်းစွာ ထင်ဟပ်ထားခြင်း၊ အနုပညာလက်ရာမြောက်ပြီး ကိုယ်တိုင်ဖန်တီးထားမှုဖြစ်ခြင်း၊ ပြန်လည်ကူးယူအသုံးပြုနိုင်မှုရှိခြင်း အစရှိသည်တို့နှင့် ကိုက်ညီမှုရှိရပါမည်။
အပိုဒ် ၅ ။ ။ ပေးအပ်ချီးမြှင့်သွားမည့် ဆု
ပြိုင်ပွဲဝင်တိုင်း၏ လက်ရာများကို အမှတ် ၃၄၀၊ ပြည်လမ်း၊ စမ်းချောင်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့ရှိ ပြင်သစ်ယဉ်ကျေးမှုဌာနတွင် ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဧပြီ ၁ မှ ၇ အထိနှင့်၊ ဇူလိုင် ၁ မှ ၁၅ အထိ ပြသသွားမည် ဖြစ်ပါသည်။ ပြင်သစ်ယဉ်ကျေးမှုဌာန၏ Facebook စာမျက်နှာတွင်လည်း ပြိုင်ပွဲဝင်များ၏ လက်ရာများကို ဧပြီ ၇ ရက်နေ့အထိ အများပြည်သူများက ဆန္ဒပြုမဲပေးနိုင်စေရန် ဖော်ပြထားမည် ဖြစ်ပါသည်။
ရွေးချယ်ခံရသည့် လက်ရာပိုင်ရှင်အား ပြင်သစ်ယဉ်ကျေးမှုဌာနတွင် အခမ်းအနားဖြင့် ဆုချီးမြှင့်သွားမည် ဖြစ်ပါသည်။ ယင်းအပြင် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ပြင်သစ်သံအမတ်ကြီးက တည်ခင်းဧည့်ခံသွားမည့် ဇူလိုင် ၁၄ ပြင်သစ်အမျိုးသားနေ့အခမ်းအနားသို့လည်း ဖိတ်ကြားသွားမည် ဖြစ်ပါသည်။ ရွေးချယ်ခံရသည့် လက်ရာကို ပရိတ်သတ် ၆၀၀၀၀ ကျော်ရှိသော ပြင်သစ်သံရုံးနှင့် ပြင်သစ်ယဉ်ကျေးမှုဌာနတို့၏ အင်တာနက်စာမျက်နှာများနှင့် Facebook များတွင် ပြသသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
အပိုဒ် ၆ ။ ။ ပြိုင်ပွဲဝင်တို့၏ လက်ရာများကို ပေးပို့ခြင်း
ရုပ်ပုံဒီဇိုင်းများကို ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ မတ်လ ၃၀ ရက် နောက်ဆုံးထား၍ အီးမေးလ်လိပ်စာ communication@ifbirmanie.org
(Cc. communication.ifbirmanie@gmail.com) သို့ဖြစ်စေ၊ အမှတ် ၃၄၀၊ ပြည်လမ်း၊ စမ်းချောင်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့ရှိ ပြင်သစ်ယဉ်ကျေးမှုဌာနသို့ဖြစ်စေ ပေးပို့ရမည် ဖြစ်ပါသည်။
အပိုဒ် ၇ ။ ။ မူပိုင်ခွင့်
ပြိုင်ပွဲဝင်တိုင်းသည် မိမိတို့၏ လက်ရာများကို မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ပြင်သစ်သံရုံးက ကျင်းပသွားမည့် ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ပြင်သစ်အမျိုးသားနေ့ အထိမ်းအမှတ်ရုပ်ပုံအဖြစ် ပြင်သစ်ယဉ်ကျေးမှုဌာနအား ပြသခွင့်၊ အသုံးပြုခွင့်၊ ပြန်လည်ကူးယူခွင့်တို့ကို အခမဲ့၊ အကန့်အသတ်မရှိ ပေးအပ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။
အသေးစိတ်သိလိုပါက ပြင်သစ်ယဉ်ကျေးမှုဌာနကို အောက်ပါအီးမေးလ်များမှတစ်ဆင့် မေးမြန်းစုံစမ်းနိုင်ပါသည်။
communication@ifbirmanie.org; Cc. communication.ifbirmanie@gmail.com
Institut françaid de Birmanie
courses@ifbirmanie.org Social Media